Ads.com.mm မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ www.Ads.com.mm နှင့် ၄င်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် ကိရိယာများ (အားလုံးကို စုပေါင်း၍ “Ads.com.mm” ဟုရည်ညွှန်းသည်) ထံသို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် Ads.com.mm သည် အားလုံးအတွက် အလုပ်လုပ်စေရေး သေချာစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည့် ရရှိသည့် hyperlink အပါအဝင် အောက်ပါသဘောတူညီချက်များကို သဘောတူပါသည်။ Ads.com.mm ကို RS-C Internet Services Company Limited မှ သင့်ထံသို့ တင်ဆက်လိုက်ပါသည်။ ဤအသုံးပြုခြင်း သဘောတူညီချက်များသည် လက်ရှိအသုံးပြုသူများအတွက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၅ မှ စ၍ လည်း ကောင်း အသုံးပြုသူ အသစ်များအတွက် လက်ခံချိန်မှစ၍လည်းကောင်း သင်နှင့် Ads.com.mm ကြားတွင် တရားဥပဒေအရ သဘောတူညီချက်တစ်ခုအဖြစ် ရှိနေရမည်။ Ads.com.mm အကောင့် တစ်ခုအဖြစ် မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ သို့မဟုတ် Ads.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ကိရိယာများကို သုံးသည့်အခါ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဆိုက်၊ ဝန် ဆောင်မှု၊ အက်ပလီကေးရှင်း သို့မဟုတ် ကိရိယာတွင် အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ညွှန်ကြားထားသကဲ့ သို့ “Create Account” ခလုတ်ကို နှိပ်သောအခါ ဤအသုံးပြုခြင်း သဘောတူညီချက်များကို သင် လက်ခံပါသည်။
(Ads.com.mm.com နှင့် ၄င်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက် ပလီကေးရှင်းများနှင့် ကိရိယာများ) အပါအဝင် Ads.com.mm ကိုသင်အသုံးပြုသည့် စည်းကမ်း တစ်ချက်အနေဖြင့် မည်သည့်တရားပဒေကိုမျှ မချိုးဖောက်ပါ၊ မည်သည့် ခြိမ်းခြောက်သည့်၊ စော် ကားသည့်၊ အသေရေဖျက်သည့်၊ ညစ်ညမ်းစွာပြောဆိုသည့် သို့မဟုတ် မလျောက်ပတ်သည့် အရေးအသားများကို မတင်ပါ၊ မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် အထင်အမြင်မှားစေသော အရေးအသား သို့မဟုတ် မည်သည့် သတင်းစကားများကိုမဆို တင်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ဆက်သွယ် ခြင်း မလုပ်ပါ၊ အခြားသော မည်သည့် တတိယလူပုဂ္ဂိုလ်၏ အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ခြင်း မပြုပါ၊ spam၊ ကူးယူဖြန့်ဝေရန် တိုက်တွန်းသည့်စာများ သို့မဟုတ် ပိရမစ်ပုံစံ အစီအစဉ်များကို မဖြန့်ဖြူး ပါ၊ ဗိုင်းရပ်စ်များ သို့မဟုတ် Ads.com.mm သို့မဟုတ် Ads.com.mm အသုံးပြုသူများ၏ ပစ္စည်း ဥစ္စာများ သို့မဟုတ် အကျိုးစီးပွားများကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် အခြားမည်သည့် နည်းပညာ များကိုမျှ မဖြန့်ဖြူးပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခြေခံ အဆောက်အအုံတွင် ယုတ္တိမကျသော ဝန်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်တင်စေရန် လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် Ads.com.mm ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ် ခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်း မလုပ်ပါ၊ အခြားသူ မည်သူမဆို ပိုင်ဆိုင်သည်များကို ၄င်းတို့ သဘောတူခြင်းမရှိဘဲ ပုံတူပွားခြင်း၊ အသစ်ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးခြင်းမလုပ်ပါ၊ ရိုဘော့ စပိုင် ဒါ၊ အချက်အလက်ကောက်ယူသူ (scraper) သို့မဟုတ် Ads.com.mm သို့ဆက်သွယ်နိုင်သည့် အခြားသော အလိုအလျောက် နည်းလမ်းများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ရှင်းလင်းစွာ သဘောတူညီခွင့်ပြု ချက်မပါဘဲ မည်သည့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ အရာများကို စုဆောင်းခြင်း မလုပ်ပါ၊ အီးမေးလ် လိပ်စာများ အပါအဝင် အခြားသူများ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို ၄င်းတို့ ၏ သဘောတူညီချက် မပါဘဲ ရယူခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် စုဆောင်းခြင်း၊ Ads.com.mm ဆိုက်၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် ကိရိယာများ သို့မဟုတ် Ads.com.mm ၏ မူပိုင်ခွင့်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များထံမှ အခွင့်အရေးများနှင့် အရာများကို ပုံတူပွား ခြင်း၊ အသစ်ပြုပြင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဖြူးခြင်း မပြုလုပ်ပါ၊ အီးမေးလ် လိပ်စာများအပါအဝင် အသုံး ပြုသူများနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ၄င်းတို့ သဘောတူညီချက်မပါဘဲ Ads. com.mm သို့ လာရောက်မှုကို ကာကွယ် သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ရန် အသုံးပြုသည့် ဖြတ်သန်းခွင့် နည်းလမ်းများဖြင့် ရယူခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့်စုဆောင်းခြင်း၊ မည်သည့် ပစ္စည်းအတုများ ကိုမဆို ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် အခြားသော တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ခြင်း မလုပ်ပါ။ Ads.com.mm သို့ တင်သော သတင်းအချက်အလက်အားလုံးနှင့် သင်၏ ပို့စ်မှဖြစ်ပေါ်လာသည့် ရလဒ်မှန်သမျှ အတွက် သင်တစ်ဦးတည်းတွင်သာ တာဝန်ရှိသည်။ မသင့်လျော်သော သို့မဟုတ် အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို ချိုးဖောက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်သော အရာများကို ငြင်းပယ်ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်ဆီးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Ads.com.mm တွင် အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ အသုံးပြုခြင်းကို ခေတ္တဖြစ်စေ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းဖြစ်စေ တားမြစ်ရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူ၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်လည်းရှိသည်။ ဤအသုံးပြုခြင်း သဘောတူညီချက်များကို မည်ကဲ့သို့သော နည်းလမ်း ဖြင့်မဆို ချိုးဖောက်နေသည် နှင့်/သို့မဟုတ် Ads.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် ကိရိယာများတွင် သံသယရှိစွာ ပြုမူနေသည်ဟု ယုံကြည်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် သင်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိနေသည့် အခြားသော Ads. com.mm အသုံးပြုသူများကို အကြောင်းကြားပြီး သံသယဖြင့် ဆက်ဆံရန် အကြံပေးနိုင်သည်။
Ads.com.mm ကို တလွဲအသုံးချခြင်း
Ads.com.mm နှင့် ၄င်း၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းသည် Ads.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဝန် ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ကိရိယာများကို ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် လူ့အဖွဲ့ အစည်း လုံခြုံရန် အတူတကွ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ပြဿနာများ၊ စော်ကားသည့်အရာနှင့် မူဝါဒ ချိုးဖောက်ခြင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ သတင်းပေးပို့စနစ်ကို အသုံးပြု၍ သတင်းပေးပို့ပါ။ ပြဿနာများ ဖန်တီးနေသည်၊ တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်နေ သည် သို့မဟုတ် (Ads.com.mm ဝန်ထမ်းများနှင့် အခြားအသုံးပြုသူများ အရှက်ရစေခြင်း ခဏတာ သို့မဟုတ် အမြဲတမ်းဆိုင်းငံ့ခြင်းဖြင့် လှည့်ကွက်ဆင်ခြင်း အပါအဝင်) ကျွန်ုပ်တို့၏ မူဝါဒ များ၏ စာ သို့မဟုတ် စိတ်ထားနှင့်ကိုက်ညီစွာ မစွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု ထင်ပါကအခြားသော တရားဥပဒေနည်းအရ မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းများကို ကန့်သတ်ခြင်းမပြုဘဲ ထိုသူများကို ကျွန်ုပ် တို့သည် သတိပေးချက်များ ထုတ်ပြန်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုကို ကန့်သတ်ခြင်း၊ အဆုံး သတ်ခြင်း လုပ်နိုင်သည်၊ လက်ခံထားသည့်အရာများကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်၊ နည်းပညာနှင့် တရား ဥပဒေအရ ခြေလှမ်းများကို အသုံးပြု၍ Ads.com.mm ကိုအသုံးမပြုစေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော် ဤအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ လက်ခံထားသော အရာများကို ဖယ်ရှား ခြင်း၊ Ads.com.mm မှ အသုံးပြုသူကို အသုံးမပြုစေခြင်း လုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ မလုပ်ဆောင် သည် ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ကိရိယာများတွင် သတင်းအချက်အလက်များကို သိုလှောင်ခြင်း၊ ကူးပြောင်းခြင်းကို စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန် မည်သည့် တာဝန်မျှမရှိပါ။ Ads.com.mm ပေါ်ရှိ တရားဥပဒေနှင့်မညီသော သို့မဟုတ် ဥပဒေမဲ့သော အရာ များအတွက် သို့မဟုတ် Ads.com.mm ကိုအသုံးပြုသူများမှ အသုံးပြုခြင်းအတွက် မည်သည့် တာဝန်မျှ မယူပါ။
Ads.com.mm ၏ အချို့သော လက္ခဏာများအရ သင်၏ကြော်ငြာကို Ads.com.mm ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသဖြစ်သည့် အခြားသောဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှု များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ကိရိယာများတွင် ပြသနိုင်သည်။ Ads.com.mm ကိုအသုံးပြုခြင်း ဖြင့် အခြားသောဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ကိရိယာများပေါ်တွင် သင် ၏ ကြော်ငြာများကို ပြသရန် သဘောတူသည်။ အခြားသော ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ကိရိယာများ၏ သဘောတူညီချက်များသည် ဤသဘောတူညီချက်များ နှင့် ဆင်သည်။ သို့သော် သင်၏ကြော်ငြာတင်သည့် တိုင်းပြည်များ၏ ထပ်ဆောင်းဥပဒေများ သို့မဟုတ် တားမြစ်ချက်များအပေါ်တွင် မူတည်မည်ဖြစ်သည်။ အခြားသောဆိုက်၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အက်ပလီကေးရှင် သို့မဟုတ် ကိရိယာတွင် သင်၏ကြော်ငြာကိုတင်ရန် ရွေးလိုက်သောအခါ အခြား သောဆိုက်၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ကိရိယာမူဝါဒများကို မချိုးဖောက်စေရန် တာဝန် ယူရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ကိရိယာများတွင် ရီပို့လုပ်ပါက သို့မဟုတ် ပြဿနာဖြစ်စေနိုင်ပြီး မည်သည့် ဥပဒေ သို့မဟုတ် မူဝါဒကိုမဆို ချိုး ဖောက်သည်ဟု ယုံကြည်ပါက ကျွန်ုပ်တို့မှ ကြော်ငြာကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။
Ads.com.mm တွင် ကျွန်ုပ်တို့၊ သင်နှင့် အခြားသော အသုံးပြုသူများ ပေးအပ်သော အကြောင်းအရာများကို ထည့်သွင်းထားသည်။ Ads.com.mm ကို မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့် နိုင်ငံ တကာ စာချုပ်များမှ စောင့်ရှောက်ထားသည်။ Ads.com.mm တွင် သို့မဟုတ် မှတစ်ဆင့် ပြသ သော အကြောင်းအရာများကို မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများနှင့် နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်များအရ စုပေါင်းအလုပ် နှင့်/သို့မဟုတ် တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း စုစည်းထားမှုအဖြစ် ကာကွယ်ပေးထား သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှ ရှင်းလင်းစွာ သဘောတူခြင်းမပြုဘဲ Ads.com.mm မှ အကြောင်းအရာများကို ပုံတူပွားခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်း သို့မဟုတ် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းမပြုရန် သင်သဘောတူသည်။ Ads.com. mm တွင်ပါဝင်သည့် မည်သည့် မူလကုဒ်ကိုမျှ ပြန်လည်ဖြုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဖြေခြင်း၊ လေ့လာရန် တစ်စစီဖြုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ရှာဖွေခြင်းမပြုရ။ အထက်ပါ စာပိုဒ်ကို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိစေဘဲ Ads.com.mm ၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမျှ (သင်၏ ကိုယ်ပိုင် အကြောင်းအရာမှလွဲ၍) မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်မျှ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ပုံတူပွားခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း သို့မဟုတ် အမြတ်ထုတ်ခြင်းမပြုရန် သင်သဘောတူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို အကြောင်းအရာ ပစ္စည်းပေးလိုက်သောအခါ ယခုသိပြီး အနာဂတ်မှတွေ့ရှိမည့် မည် သည့် မီဒီယာတွင်မဆိုနှင့် Ads.com.mm သို့မဟုတ် အခြားသော တိုင်းပြည်များတွင် မျိုးတူစုထား သည့် ဆိုက်များကဲ့သို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Ads.com.mm အဖွဲ့အစည်း၏ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ ဖြစ် သည့် အခြားသော မည်သည့်ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် ကိရိယာများ တွင် ထိုအကြောင်းအရာပစ္စည်း၏ မည်သည့် အားလုံးသောမူပိုင်ခွင့်၊ ကျော်ကြားမှု၊ ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဒီဇိုင်း၊ ဒေတာဘေ့စ်နှင့် ဥာဏပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်များကို အသုံးချရန် သင့် တွင် သီးသန့်မဟုတ်သော၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ၊ ရာသက်ပန်၊ ပြောင်းလဲ၍မရသာ၊ အသုံးပြုမှုတစ်ခု ချင်းစီအတွက် အခကြေးငွေပေးရန်မလိုသော၊ (မြောက်များစွာသော အဆင့်များမှ) တစ်ဆင့် လိုင်စင်ချနိုင်သော အခွင့်အရေးရှိ၍ ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ကို သင့်ဘက်မှ အာမခံသည်။ ထို့အပြင် တရားဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ အကြောင်းအရာ ပစ္စည်းရှိ သင်၏ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးများအားလုံးကို စွန့်လွှတ်သည်။
တတိယပုဂ္ဂိုလ်၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်သည့် အကြောင်းအရာပစ္စည်းများ မတင် ပါနှင့်။ မူပိုင်ခွင့်၊ ဒီဇိုင်းနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် (ဥပမာ ရောင်းရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းအတု) ကဲ့သို့သော ဥာဏပိုင်းဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်သည့် အကြောင်းအရာပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ သို့သော် ၄င်းတို့ကိုသာ မကန့်သတ်ထားပါ။ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှ Ads.com.mm ပေါ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား အမြောက်အများကို ပေးအပ်ထားသည်။ အထူး သဖြင့် မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် အခွင့်အရေးများနှင့် အခြားသော အခွင့်အရေးများကို ပိုင်ဆိုင်သူများ၊ အခွင့်အရေးရှိ ပါတီများသည် ၄င်းတို့၏ အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်သည့် မည် သည့် ကြောငြာကိုမဆို ရီပို့တင်နိုင်ပြီး အဆိုပါ ကြော်ငြာကိုဖယ်ရှားရန် တောင်းဆိုမှုကို တင်သွင်း နိုင်သည်။ အခွင့်အရေးရှိ ပါတီ၏ တရားဥပဒေဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်မှ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ မှန်ကန် သည့်ပုံစံဖြင့် ရီပို့တင်ပါက ဥာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်များကို ချိုးဖောက်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို Ads. com.mm မှ ဖယ်ရှားမည် ဖြစ်သည်။
ချိုးဖောက်မှုကို ရီပို့တင်ခြင်း :
ချိုးဖောက်မှု နို့တစ်စာ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက် Notice of Infringement Form ကိုဖြည့်ပြီး Ads.com.mm: legal@deals.jumia.com သို့ အီးမေးလ်ပို့ရန် လိုအပ်သည်။ သင်၏ ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်များကို ချိုးဖောက်သည့် ကြော်ငြာများကို ရီပို့တင်ရန် ဤလျှောက်လွှာ (this form) ကိုသုံးနိုင်ပြီး လက်မှတ်ထိုးပါ။ ချိုးဖောက်မှု နို့တစ်စာ လျှောက်လွှာတွင် တောင်းဆိုထားသည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် ဤအရာများကို ရီပို့တင်သည့် ဘက်မှသူများသည် အခွင့်အရေး ကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ဘက်မှ သို့မဟုတ် ၄င်းတို့၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရ ကိုယ်စားလှယ် များဖြစ်ကြောင်း သေချာစေရန် အတွက်ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်ကြောင့် Ads.com.mm သည် ဖယ်ရှားရမည့် ကြော်ငြာကို ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်ထားသည့် ချိုးဖောက်မှု နို့တစ်စာ လျှောက်လွှာကို ရရှိပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် Ads.com.mm သို့ ပေးထားသည့် အီး မေးလ်လိပ်စာမှတစ်ဆင့် နောက်ပိုင်း ရီပို့များကို ရိုးရှင်းစွာ ပေးပို့နိုင်သည်။ မှတ်ချက် - ဤလျှောက်လွှာကို သက်ဆိုင်ရာ ဥာဏပစ္စည်း မူပိုင်ခွင့်ကို တရားဥပဒေနှင့် အညီ ပိုင်ဆိုင်သူများမှသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ချိုးဖောက်မှု နို့တစ်သည် Ads.com.mm အသုံးပြု သူများမှ ပေးအပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများသည် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်များ၏ မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ် အသား မူပိုင်ခွင့်များနှင့် အခြားသော ဥာဏပိုင်ဆိုင်မှု မူပိုင်ခွင့်များကို မချိုးဖောက်စေရန် သေချာ အောင် ဖြစ်သည်။
ဤသဘောတူချက်များမှ မည်သည့်အရာမဆိုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေါ့ဆမှု သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ် တို့၏ အေးဂျင့်များ သို့မဟုတ် ဝန်ထမ်းများ၏ ပေါ့ဆမှုကြောင့်ဖြစ်သော မမှန်မကန် အယောင် ဆောင်မှု သို့မဟုတ် သေဆုံးမှု သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အနာတရဖြစ်မှုအတွက် တာဝန်ယူမှု ကို ကန့်သတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။ အခြားသော အသုံးပြုသူများ တင်သည့် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်သည့် အရာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါဟု သင်သဘောတူသည်။ အသုံးပြုသူများ တင်သည့်အရာများကို ကျွန်ုပ်တို့မှ လေ့လာသုံးသပ်ပါသည်။ သို့သော် အသုံးပြုသူများကြားတွင် အမှန်တစ်ကယ် ရောင်းဝယ်ခြင်းများ မပါဝင်ပါ။ Ads.com.mm ရှိ အကြောင်းအရာ ပစ္စည်းအများစုသည် အခြားသော အသုံးပြုသူများထံမှ လာသောကြောင့် တင် သည့် ပို့စ် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူထံ ဆက်သွယ်နိုင်မှုများ သို့မဟုတ် အရည်အသွေး၊ စိတ်ချရမှု သို့မဟုတ် ပေးအပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်း၏ တရားဝင်မှု မှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အာမခံနိုင် ခြင်း မရှိပါ။ မည်သည့်အခါတွင်မဆို ရာဇဝတ်ပြစ်မှုဖြစ်သည့်၊ အရပ်သားတာဝန်ယူမှု သို့မဟုတ် အခြား နည်းဖြင့် မည်သည့်သင့်တော်သော ဥပဒေကိုမဆို ချိုးဖောက်သည့် မည်သည့်ရောင်းဝယ်မှုများ၊ အားပေးသည့် လုပ်ဆောင်မှုများကို ကန့်သတ်ခြင်းမရှိစေဘဲ အခြားမည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်၏ မူပိုင်ခွင့် များကို ချိုးဖောက်သော တရားဥပဒေနှင့်မညီသည့်၊ ခြိမ်းခြောက်သည့်၊ စော်ကားသည့်၊ အသေရေ ဖျက်သည့်၊ ညစ်ညမ်းသည့် သို့မဟုတ် မသင့်လျော်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ သို့မဟုတ် မည်သည့်အရာဝတ္ထုများကို တင်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် မည်သည့် တာဝန်မျှမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုများထံသို့ စဉ်ဆက်မပြတ်၊ အမှားကင်းသော သို့မဟုတ် လုံခြုံစွာ အသုံးပြုနိုင်ရန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုရှိ ချို့ယွင်းချက်များကို ပြင်ဆင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ အာမခံနိုင် ခြင်း မရှိကြောင်း သင် အသိအမှတ်ပြုသည်။ အဆက်ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိသော ဝန်ဆောင်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် သင့်လျော်သော ကြိုးစားအားထုတ်မှု လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ မှ အာမခံနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ ဆိုက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများ သို့မဟုတ် ကိရိယာများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ရရှိမှုအတွက် မည်သည့် ကတိကဝတ်များ သို့မဟုတ် အာမခံ ချက်များ (ရှင်းလင်းစွာဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ) ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ထိုနည်းတူစွာ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်နှင့် စတဲ့ကျု့ဥပဒေမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် အရည်အသွေး၊ ကုန်သွယ်နိုင်မှု၊ ကုန်သွယ်နိုင်သည့် အရည်အသွေး၊ အကြမ်းခံမှု၊ အပါအဝင် ရှင်း လင်းစွာဖြစ်စေ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ မည်သည့်အာမခံမှုများ၊ ကိုယ်စားပြုမှုများနှင့် အခြေအနေများ အားလုံးကို တရားဥပဒေမှ ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ မသက်ဆိုင်ကြောင်း ရှင်းလင်းစွာ ငြင်းဆန်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို သင်အကြံပေးသည့်တိုင်အောင် သို့မဟုတ် မည်သည့်အဆိုပါ ထိခိုက် မှုဖြစ်လာနိုင်မည့် ဖြစ်နိုင်ချေကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုတ္ထိကျကျ မြင်သည့်တိုင်အောင် Ads.com.mm ကို သင်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြု၍ မရခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် မည်သည့်ဆုံးရှုံးမှု၊ (အမြတ် ငွေအပါအဝင်) ငွေကြေးဖြစ်စေ၊ စိတ်စေတနာ၊ သို့မဟုတ် ဂုဏ်သတင်း သို့မဟုတ် မည်သည့် အထူး၊ သွယ်ဝိုက်သော သို့မဟုတ် နောက်ဆက်တွဲ ထိခိုက်မှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန် မရှိပါ။ အချို့သော တရားစီရင်နယ်မြေများတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများမပါဝင်ခြင်း သို့မဟုတ် အာမခံ မှုကို ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ။ ထိုအခါ အဆိုပါ ငြင်းပယ်ခြင်းများနှင့် မပါဝင်ခြင်းများသည် သင့် ကို အကျိုးသက်ရောက်မည်မဟုတ်ပါ။ အထက်ပါ စာပိုဒ်ရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် တာဝန်ရှိ သည်ဟု တွေ့ရှိပါက သင့်ထံသို့ သို့မဟုတ် မည်သည့် တတိယပါတီထံသို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ယူမှု ကို (စတဲ့ကျု့ဥပဒေ သို့မဟုတ် အခြားအရ စာချုပ်အရ၊ မတရားနစ်နာမှု၊ ပေါ့ဆမှု၊ မတရားနစ်နာမှု တွင် လုံးဝတာဝန်ရှိမှုဖြစ်စေ) (က) တာဝန်ရှိမှုဖြစ်လာစေသည့် လုပ်ရပ်မတိုင်မှီ ၁၂ လတွင် သင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးသည့် စုစုပေါင်း အဖိုးအခများနှင့် (ခ) ၁၀၀ ကျပ် အများဆုံးအဖြစ်သာ ကန့်သတ် ထားသည်။
Ads.com.mm အသုံးပြုသူတစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးထက်ပိုသူများနှင့် အငြင်းပွားသော အခါ မည်သည့်အမျိုးအစားနှင့် သဘာဝ၊ သိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ၊ အဆိုပါ အငြင်းပွားမှု များနှင့် မည်သည့်နည်းနှင့်မဆို ဆက်စပ်နေသည့် သို့မဟုတ် ၄င်းမှပေါ်ထွက်လာသည့် လျော်ကြေး တောင်းခြင်း၊ တောင်းဆိုမှုများနှင့် ပျက်စီးမှုများ (အမှန်တစ်ကယ်နှင့် နောက်ဆက်တွဲ) မည်သည့် အတွက်မဆို ကျွန်ုပ်တို့ (နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရာရှိများ၊ ဒါရိုက်တာများ၊ အေးဂျင့်များ၊ လက်အောက်ခံ များ၊ ပူးတွဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများ) ကို လွတ်ငြိမ်းစေရမည်။
သင်နှင့် Ads.com.mm အကြားတွင် အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပါက Ads.com.mm Help page သို့ သွား၍ ဖြေရှင်းရန် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဖို့ အကြံပေးလိုသည်။ တရားရုံးသို့ မသွားဘဲ အခြား နည်း လမ်းများအဖြစ် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြားနည်း လမ်းဖြင့် အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းခြင်း ဖြစ်စဉ်များမှတစ်ဆင့် ဖြေရှင်းရန် ယုတ္ထိကျသည့် တောင်းဆိုမှု များကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသွားမည်ဖြစ်သည်။
Ads.com.mm တွင်တင်ထားသည့် ဤသဘောတူချက်များနှင့် အခြားမူဝါဒများသည် Ads. com.mm နှင့် သင့်ကြားရှိ သဘောတူချက်တစ်ခုလုံးဖြစ်ပြီး မည်သည့် ကြိုတင်သဘောတူချက် များကိုမဆို အစားထိုးသည်။ ဤသဘောတူညီချက်ဖြင့် မည်သည့်အေဂျင်စီ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ပူးတွဲ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမား သို့မဟုတ် franchise ပေးသူ - franchise ရသူ အဆက်အသွယ်ကို မရည်ရွယ်ပါ သို့မဟုတ် မဖန်တီးပါ။
ဤသဘောတူညီချက်၏ အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို ပြည်သူ့သမ္မတ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများမှ စောင့်ရှောက်ပြီး အနက်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသည်။ Ads.com.mm နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်ရပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုကိုမဆို ပြည်သူ့သမ္မတ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ရန်ကုန်၏ တရားရုံးများတွင်သာ ဖြေရှင်းရမည်။ ပြည်သူ့သမ္မတ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် တရားရုံးများ၏ သီးသန့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကို သင်ရော Ads.com.mm ပါ လေးစားလိုက်နာရန် သဘောတူသည်။
မည်သည့် အထူးပြဌာန်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့မှ အတည်ပြုခြင်းမရှိပါက နောက်ပိုင်းတွင် ထိုကဲ့သို့လုပ်ရန် အခွင့်ကို ငြင်းပယ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ တရားရုံးမှ ဤသဘောတူချက်များမှ မည်သည့် တစ်ချက်ချက်ကိုဖြစ်စေ ဖယ်ရှားလိုက်ပါက ကျန်ရှိသည့် သဘောတူချက်များသည် တည်မြဲမည် ဖြစ်သည်။ အောက်ပါ နို့တစ် ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု တည်းဖြင့် ဤသဘောတူချက်ကို အလိုအလျောက် ပြန်ပေးနိုင်သည်။
တရားဝင်မဟုတ်သော သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်သည့် အကြောင်းအရာပစ္စည်းများနှင့် သက် ဆိုင်သည့် နို့တစ်စာများမှအပ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ သင်ပေးပို့သော နို့တစ်စာသည် legal@vendito. com သို့ လိပ်မူ၍ စာတိုက်မှတ်ပုံတင်၍ ပေးပို့ရမည်။ သင်ပေးအပ်သည့် အီးမေးလ်လိပ်စာမှ တစ် ဆင့် သို့မဟုတ် စာတိုက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် နို့တစ်စာများကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးပို့မည်။ မှတ်ပုံ တင်ထားသည့် လိပ်စာမှ ပေးပို့သည့် နို့တစ်စာများကို ပေးပို့သည့် ရက်ပြီးနောက် ငါးရက်အကြာ တွင်လက်ခံရရှိသည်ဟု သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်ကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ပြီး သင်နောက် တစ်ခါ ပို့စ်တင်သည့်အချိန် သို့မဟုတ် Ads.com.mm ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် မူဝါဒပြုပြင်ပြီးသည့် နောက် ရက်ပေါင်း ၃၀ အကြာ မည်သည့်အချိန်မှ စောသည်ဖြစ်စေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူစာချုပ်ကို ပြင်ဆင်ချက်များသည် အသုံးပြုသူနှင့် ကျွန်ုပ်တို့မှ လက်မှတ်မထိုးထားလျှင်၊ စာဖြင့်ရေးသားထားခြင်းမရှိလျှင် အကျိုးသက်ရောက်မည် မဟုတ်ပါ။
Ads.com.mm အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကူအညီလိုသည်ဖြစ်စေ Ads.com.mm Help page ကိုကြည့်ပါ။